Telefishinka Sweden oo dacaayad siiyay Ayaan Hirsi Ali | Somaliska
Haweeneyda Soomaalida ah ee caadeysatay naceybka iyo weerarka diinta Islaamka ee lagu magacaabo Ayaan Hirsi Ali ayaa xalay laga soo daayay telefishinka SVT, iyagoo wareysi dheer la yeeshay oo ay kaga hadlayso buug cusub oo ay ka qortay Islaamka iyo waxay ugu yeertay dib u habeynta diinta Islaamka.
Telefishinka ayaa soo bandhigay sida ay Ayaan u doonayso in ay wax uga badasho diinta Islaamka, iyadoo buugeeda kula talisay Muslimiinta in aysan raacin wax kasta oo ku qoran Quraanka iyo in aysan dhagaysan xadiithyada nabiga (nnkh). Waxay sheegtay in hada ay go’aansatay in aysan ka bixin Islaamka balse ay ka shaqayso sidii ay isbedal u samayn lahayd. Waxay intaas ku dartay in ururka lagu magacaabo Daacish ee ka dagaalama Iraq iyo Syria ay yihiin kuwo Muslimiinta ku qasbaya in ay ama Quraanka raacaan oo iyaga ku biiraan ama ay ka soo horjeestaan oo Iyada ay la mid noqdaan.
Ayaan Hersi ayaa muddo dheer dacaayad iyo been abuur ka faafinaysay Muslimiinta iyo Islaamka, iyadoo sanadihii dambe ku nooleyd wadanka Maraykanka. Inkastoo xiligii hore ay dadka inta badan u yaqaaneen in ay tahay cunsuriyad magac doon ah, ayay sanadihii dambe ku guuleysatay in ay iska dhigto khabiir ku taqasusay Islaamka, iyadoo hada ay waraystaan warbaahinta waaweyn oo aan xiligii hore wax dacaayad ah siin jirin.
Si kastaba ha ahaatee, Ayaan Hersi iyo kuwa ku fikirka ah ayaa u muuqda in ay heleen taageero taasoo kaga imaanayso meel aan la filayn. Kooxaha argagixisada ah ee ku ciyaaraya magaca Islaamka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee Ayaan iyo dadka la mid ah ay tusaale u isticmaalaan si ay been uga faafiyaan diinta Islaamka.
Tan in LA akhriyo ayaaba Danbi ah iyo in waxay Ku hadashay Bulshada looso Post gareeyo. Way baadiyowday markaas Ay Ciyay oo kale in laga soo qaado weeye Nacdal wajiga foosha xun haka Kortee.
ASC jimcaale tan war keeda hasoo qorin nacalad baa ku dhacdaye
Ilaaahay hasoo hanuuniyo
yaa wax war ah kahaayo arimaha labada sano walaalayaal
Baryahan 2sano ma aamuseen yaa war cusub haya aniga dacwad baa i xaraysan 2jeer diidmo helay
war naagtan waa la ogyahay wexey tahay gaal iyo muslimba wey og yihiin ee naga daaya dembigeeda waa qof ridowdaye mida war baahinta wexey ila tahay in ey indhaha caalamka tusayaan naagtan waxa ey sheegeyso si loo helo wax ka soo horjeedo oo runta sheeg
Warka oo aad soo badisaan ayaa loo xiise qabaas.